Burgos क्याथेड्रल, एक गॉथिक सौन्दर्य यात्रा समाचार
मलाई सँधै मनपर्‍यो गथिक गिर्जाघरहरू अन्य वास्तु शैली भन्दा ती माथि, र यदि उही कुरा तपाईंलाई भयो भने, त्यहाँ एउटा चर्च छ जुन तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न: यो सान्ता मारिया डे बुर्गोसको क्याथेड्रल, स्पेनमा।
यो एक विशाल र सुन्दर चर्च हो जसले धेरै सांस्कृतिक, कलात्मक र धार्मिक चमत्कारहरू समेट्छ। यो धेरै सय वर्ष पुरानो हो, धेरै इतिहासको साथ, जुन अझै पनि समयको बावजुद खडा हुन्छ र जसले तपाईंलाई यसको चैपलहरू, यसको ढोका, क्लीस्टरहरू, वेदीहरू र अन्य आकर्षक कुनाहरूको माध्यमबाट लामो यात्रामा निम्तो दिन्छ।
1 Burgos क्याथेड्रल
2 बुर्गोसको क्याथेड्रल भ्रमण गर्नुहोस्
3 Burgos क्याथेड्रल मा के यात्रा गर्ने
जबकि वर्तमान मन्दिर यो गोथिक शैलीमा छ र १th औं शताब्दीको हो यो यहाँ हुर्काइएको पहिलो होइन। 1080 1095० र १० XNUMX ween बीचमा एउटा रोमान्सिक गिरजाघर थियो जुन त्यतिबेलाका महत्वपूर्ण घटनाहरूको दृश्य थियो जस्तै फर्नान्डो III र बियट्रिज दे सुआभिया बीचको विवाह, जुन त्यतिबेला क्यास्टिलियन-लियोनीको राजधानीको रूपमा बरगोसको मूल्य थियो। राज्य।
यो निश्चित रूपमा यो मूल्य थियो र बाँकी युरोपमा विस्तारमा यसको महत्व, जसले यसलाई स्पष्ट पार्‍यो कि बुर्गोसलाई अझ महत्त्वपूर्ण मन्दिर चाहिन्छ। यो वर्तमान क्याथेड्रलको कीटाणु हो, जसको जुलाई १२२१ मा शिलान्यास गरियो। मास्टर्स र आर्किटेक्टहरू फ्रान्सबाट ल्याइएको थियो किनकि पहिलो विचार भनेको नोट्रे दाम्मे वा रेम्सको सुन्दर क्याथेड्रलसँग मिल्दोजुल्दो कुरा बनाउनु थियो।
यसैले, शुरुका नौ बर्षमा कामहरू धेरै उन्नत भए र १२1230० सम्ममा कल्ट पहिले नै सक्षम पारिएको थियो यो, को प्रायद्वीपको पहिलो गोथिक क्याथेड्रल। जब यी खाली ठाउँहरू, श्याभेट, एम्बुलेटरको नाभाहरू र तिनीहरूका सम्बन्धित कक्षहरू र गाउने काम गर्नेहरू - एपेसे पूरा भएपछि, रोमान्स्क क्याथेड्रल ध्वस्त पारियो। कार्यहरू त्यसपछि बग्यो र त्यस्तै १२1260० मा मन्दिर पूर्ण रूपमा पवित्र गरिएको थियो।
केवल years० बर्षमा क्याथेड्रलको निर्माण पूरा गर्नु एक उपलब्धी थियो। क्याथेड्रलहरू, त्यस समयमा शताब्दीयौंसम्म निर्माण गर्न सकिन्थ्यो त्यसैले बुर्गोसमा एउटाको यो मूल्य हुन्छ। अझै, त्यहाँ पछि नयाँ धेरै कामहरू थिए हालको मन्दिरको शरीरविज्ञान त्यसबेलाको होइन। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन १ XNUMX औं शताब्दीमा भयो र त्यहाँ तीनवटा थिए: गुम्बजलाई परिवर्तन गरियो र स्पाइरहरू र कन्स्टेबलहरूको चैपल निर्माण गरियो।
एक शताब्दी पछि, रिलिक्सको चैपल र नयाँ विद्रोहीको साथ, विस्तारहरू समाप्त भए। यो शताब्दियौंदेखि क्याथेड्रल कलाका कामहरूले भरिएको थियो, यद्यपि कुनै पनि प्रमुख पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू लिएका थिएनन्। यी कार्यहरूको लागि बुर्गोसको क्याथेड्रलले १ th र २० औं शताब्दीसम्म पर्खनु पर्‍यो।
तर सामान्य रेखामा क्याथेड्रल कस्तो छ? खैर यो एक छ ल्याटिन क्रस लेआउट by 84 बाई meters meters मिटर र तीन नाभाहरू: एघार मीटर र २ 25 मिटर उचाईको मध्य एक र अर्को पार्श्वहरू। कलाको कार्यहरू जताततै छन्: अटोमेटनको साथ एउटा घडी, फ्लाइ क्याचर, यस पुनर्जागरणको प्रमुख वेदीपिस, सुन्दर शाही मकबरा, बहुमूल्य अखरोटको स्टालसहितको गायक, दुई अ organs्ग, एउटा बारोक र अन्य नियोक्लासिकल, क्लोरिस्टर, र पक्कै पनि यसका साथ प्रसिद्ध सुनौलो सीढ़ी धेरै उत्कीर्णनहरू र प्रत्येक चैपलमा अचम्मका लागि केहि अरू।
अलग प्याराग्राफ मँ नाम दिन चाहान्छु यहाँ तपाईले देख्नुहुनेछ सिड र डोआ जिमेनाको चिहान। उनीहरू १ 1921 २१ मा सान पेड्रो डि कार्डियाको गुम्बाबाट सरुवा गरिएको थियो र आज यो साधारण चिहान हो जुन मार्बलको विशाल टुक्राले ढाकिएको छ र १ surrounded औं शताब्दीका बारहरूले घेरिएको छ।
बुर्गोसको क्याथेड्रल भ्रमण गर्नुहोस्
क्याथेड्रलको बिभिन्न घण्टा र केहि विशेष घण्टा हुन्छ:
मार्च १ 19 देखि अक्टोबर 31१ सम्म यो बिहान :9: :30० देखि :7::30० सम्म खुल्छ, साँझ :6: .० सम्म पहुँच बन्द हुन्छ।
नोभेम्बर १ देखि मार्च १ 1 सम्म यो बिहान १० देखि साँझ 18 सम्म खुल्छ र प्रवेशद्वारहरू साँझ 10 बजे बन्द हुन्छ।
विशेष घण्टा निश्चित दिनहरू: अप्रिल 7, डिसेम्बर,, २ and र 8१ र जनवरी १। यी घण्टा फेला पार्नको लागि, तपाईंले क्याथेड्रलको वेबसाइट भ्रमण गर्नुपर्नेछ।
क्याथेड्रल म्गलबार दिउँसो :4::30० देखि साँझ :6::30० सम्म जाडोमा :4::30० देखि साँझ from सम्म नि: शुल्क प्रवेश प्रदान गर्दछ।
व्यक्तिगत प्रवेश शुल्कeयूरो,765 भन्दा बढीeयूरोका लागि, २6वर्ष मुनिका विद्यार्थीहरूले 28..4० युरो भुक्तानी गर्छन्, to देखि १ from वर्षका बच्चाहरूले २ यूरो तिर्छन् र १ 50 भन्दा बढी व्यक्तिको लागि टिकट7यूरो पर्छ। बदलेमा प्रमाण पत्रको साथ तीर्थयात्रीहरूले ,,,००० यूरो, अपा 14्ग २ यूरो र बेरोजगार 2,,० यूरो भुक्तान गर्छन्। व्यक्तिगत टिकट मूल्यहरूमा अडियो गाइडहरूको प्रयोग समावेश छ।
Burgos क्याथेड्रल मा के यात्रा गर्ने
मन्दिरका केही कुनाहरू छन् जुन साँच्चिकै सुन्दर छ र तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्न। बाहिर तपाईं फोटो खिच्न र प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ बिभिन्न कभरहरू मुख्यबाट सुरू गर्दै जुन प्लाजा डे सान्ता मारियाको अगाडि छ र तीन भागहरूको साथ गोथिक शैलीमा छ, जारी राख्दै retrochoir र यसको सेन्ट पल र सेन्ट पीटर र धेरै चैपलको सुन्दर अलाबस्टर मूर्तिहरू।
La सान्ता टेक्लाको चैपल, पहिलो शताब्दीको कुमारी र शहीद, भव्य छ, यसको वाल्टमा धेरै र colors्गहरू सहित, स्वर्गदूतहरू र सन्तहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। को मुख्य वेदीपिस यो बारोक, सुनौलो छ, सान्ता टेक्लाको कुँदिएको खम्बामा जलाइएको छ। अर्को चाखलाग्दो चैपल हो कन्सेप्शन वा सान्ता आनाको चैपल, १ XNUMX औं शताब्दीको उत्तरार्धको काम, जहाँसुकै कोर्निस र राजधानीको साथ फूलहरू गोथिक कलाको।
La कन्स्टेबलहरूको चैपल अर्को क्याथेड्रल भित्र यसलाई क्याथेड्रलको रूपमा विज्ञापन गरिएको छ किनकि यो मन्दिरको सबै भन्दा महत्वपूर्ण र सुन्दर हो। यो डान पेड्रो फर्नांडीज डे भेलास्को र उनकी श्रीमती, क्यास्टेबलका कन्स्टेबलको पैसाले आज कारारा संगमरमरको मूर्तिमा प्रस्तुत गरिएको हो। यो सान पेड्रोको चैपल र एउटा साइटमा निर्माण गरिएको थियो र यो १ 1496 XNUMX in मा सम्पन्न भयो। यसमा ताराहरूको आकारमा सुन्दर चमकदार वाल्ट छ, सबै गोथिक फिलिग्री, साइमन डी कोलोनियाको काम।
कलाको अर्को उल्लेखनीय टुक्रा तथाकथित हो गोल्डन सीढी, ट्रान्ससेटको नेभको अन्त्यमा अवस्थित, क्यार्नल फर्नान गोन्जालेजसँग क्याथेड्रललाई कोरोनेरिया ढोका पार गरेर र यसको निर्माणको समयमा आठ मिटर ड्रप बचाएर जोडियो। सीढी भनेको डिएगो डी सिलोको काम हो र यो १ 1523२19 मा सम्पन्न भयो। यसमा १ steps चरणहरू छन् र जूमोर्फिक र प्लान्ट मोटिफ, एन्जिलका टाउको, फूलहरू र बगहरूले सजिलैसँग सजाइएको छ। उनी धेरै सुन्दर छिन् र उनी यति प्रसिद्ध थिइन कि यो पेरिस ओपेरा को सीढी पछि मोडेल गरिएको थियो.
La गायक को स्टालहरु यो कुशल छ, मास्टर मूर्तिकारहरूको काम: तल्लो तहमा पछाडि with 44 सीट र माथिल्लो तहमा 59 seats सीटहरू, जुन सबै ख्रीष्टको जीवनबाट राहत पाएका छन्। काठ अखरोट हो र ग्रिल १ 1602०२ बाट आएको छ। अन्त्यमा, यसमा नहेर्नुहोस् Transalt यसको कलाको पाँच कार्यहरू, मुख्य पवित्र धर्म, transept र डोम, संग मुख्य वेदीपिस र पक्कै पनि क्याथेड्रल संग्रहालय।
सत्य यो हो कि बरगोसको क्याथेड्रल भित्र आर्टका धेरै कार्यहरू छन्, तपाईले गर्न सक्ने उत्तम कुरा भनेको हातमा अडियो गाइड छ जुन टिकटको मूल्यमा समावेश छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » Burgos क्याथेड्रल, एक गॉथिक सौन्दर्य